Turkiga oo deeq gargaar caafimaad ah oo baahi weyn loo qabay soo gaarsiiyay Soomaaliya | XORRIYA NEWS
Home Wararka Turkiga oo deeq gargaar caafimaad ah oo baahi weyn loo qabay soo...
Turkiga oo deeq gargaar caafimaad ah oo baahi weyn loo qabay soo gaarsiiyay Soomaaliya
Qalabka Sheybaarka, Qalabka lagu neefsado, Labiska shaqaalaha caafimaadka ayaa ka mid ahaa Deeqda Caafimaad ee Turkiga.
Dowladda Turkiga ayaa deeq gargaar ah oo caafimaad ooo baahi u qabeyn dadka ugu deeqday Soomaaliya walibana ka soo dajisaday Caasimada Muqdisho.
Ka hortagista iyo yareynta faafida xanuunka Coronavirus ayay dowladda Soomaaliya xusul weyn ugu jirta iyada oo sidoo kale olole lagu xakemeynayo faafida cudurkaani halista badan.
Halkaan ka daalaco sawirada gargaarka Turkiga ka dajiyen Soomaaliya;
Turkiga oo gargaar caafimaad soo gaarsiiyay Soomaaliya.